China TQSF Series Gravity Destoner fanamboarana sy orinasa | Chinatown
TQSF andiana gravité serasera ho an'ny fanadiovana varimbazaha, hanesorana vato, hanasokajiana voa, hanala ireo maloto maivana sns.
TQSF Gravity andiany Destoner
TQSF Series Gravity Destoner ho an'ny fanadiovana varimbazaha, hanesorana vato, hanasokajiana voa, hanala ireo maloto maivana sns.
Ity mpampisaraka vato ity dia manana fampisehoana mampiavaka tsara. Izy io dia afaka manala ireo vato maivana amin'ny haben'ny voam-bary avy amin'ny fikorianan'ny voamaina, ary mandray anjara betsaka amin'ny fahazoana vokatra tonga lafatra amin'ny fenitra ara-pahasalamana mifandraika amin'izany.
Ny fitaovana dia mianjera eo amin'ny takelaka fitarihana avy ao anaty ary manarona mitovy amin'ny sakan'ny sieve ambony noho ny fihetsika vibratory an'ny masinina. Ny hetsika mitambatra hovitrovitra sy ny fikorianan'ny rivotra dia mahatonga ny fitaovana amin'ny sivana ambony voasokajy ho azy araka ny gravité manokana sy ny haben'ny granular ao aminy. Ny fitaovana maivana dia nanjary tafahoatra tamin'ny sivana ambony ary nesorina tamin'ny masinina tamin'ny rambon'ny masinina. Fitaovana maivana kokoa toa ny mololo sy vovoka no esorina amin'ny fivoahan'ny faniriana. Ny fitaovana mavesatra miaraka amin'ny vato sy fasika dia mianjera amin'ny sivana ambany amin'ny sivana ambony. Rehefa mihetsika ny fikororohana ny masinina, ny fikorianan'ny rivotra ary ny fikororohana, ny entana mavesatra dia mihetsika mankany amin'ny rambon'ny milina ary mivoaka avy ao amin'ny lalan'ny rambony ary ny fasika sy ny vato kosa mihetsika mankany amin'ny lohan'ilay masinina ary mivoaka amin'ny fivoahan'ny vato. Amin'ny alàlan'ny varavarankely fandinihana, ny mpandraharaha dia afaka mijery mivantana ny vokatry ny fanasokajiana sy ny famonoana vato.
- Ny boaty sivana izay mavesatra sieves roa sosona dia tohanan'ny loharano vita amin'ny rubber misy lavaka ary vokarin'ny vibrator iray na roa mifototra amin'ny fanatanterahana ny masinina.
- Mba hahatratrarana ny ambaratonga optimum amin'ny fisarahana sy fanasokajiana, ny fironana ny sivana, ny haavon'ny rivotra ary koa ny fisarahana farany dia azo ahitsy mifanaraka amin'izany.
- Ny masinina manelingelina dia mety amin'ny fanesorana vato amin'ny renirano voan-javatra mitohy
- Amin'ny fototry ny fahasamihafana eo amin'ny hery misintona manokana, tratra ny fanesorana ireo loto maloto avo toy ny vato, tanimanga sy vy ary vera.
- Amin'ny maha-masinina fanadiovana voamaina malaza azy, dia ampiasaina amin'ny ampahany amin'ny fanadiovana akora amin'ny fikosoham-bary, fikosoham-bary, fikosoham-bary ary zavamaniry fanodinana masomboly.
1) Fanasokajiana azo itokisana sy tsara indrindra.
2) Tsindry ratsy, tsy misy vovoka mipoitra.
3) Fahaizana ambony.
4) Fandidiana sy fikojakojana mora.
Ny takelaka sivana ambony:
Efijery fizarana telo misy lavaka habe samy hafa no ampiasaina hanatsarana ny fanasokajiana automatique ny akora.
Takelaka sivana eto ambany:
Izy io dia miasa ambonin'ny fanesorana ny vato amin'ny fahombiazana avo.
Aza hadino ny sivana tsy ho voasakana amin'ny alàlan'ny fanadiovana tsara ny sivana.
Ampiasaina ny mari-pamantarana sy ny zoro efijery:
Ny haben'ny amplitude sy ny écran dia azo ahitsy arak'ilay tondro.
Fanitsiana varavarana rivotra:
Ny haavon'ny rivotra dia azo ovaina arakaraka ny toetra mampiavaka azy, mba hahatratrarana ny vokany ratsy.
Teo aloha: Fangaro mifangaro
Manaraka: Fangaro mixer
Andriamby Tubular Series TCXT
Fanalefahana mahery vaika
TSYZ Fanamafisana ny tsindry amin'ny varimbazaha